सानो नपाको ठूलो समस्याः चुनौती धेरै छन्, कामले जित्नेछौं : कृष्ण लिम्बू – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसानो नपाको ठूलो समस्याः चुनौती धेरै छन्, कामले जित्नेछौं : कृष्ण लिम्बू
May 31, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, खरसाङ, मुख्य समाचार 0
खरसाङ, 31 मई।
दार्जीलिङ र कालेबुङ नगरपालिकाको तुलना खरसाङ नगरपालिका सानो छ। तर यहाँको समस्या ठूलो छ। सानै नगरपालिका भए पनि यहाँ यति धेरै समस्या छन्, सधैँ यसैको वरिपरि गोलगोल घुमिबस्न बाध्य हुन्छ, नपा बोर्ड। एउटा समस्याको स्थायी समाधान नभई अर्को समस्याले शिर उठाउने गर्छ। नगरपालिकाको नयाँ बोर्ड बनिसकेको छ। मोर्चाको यो नयाँ बोर्डअघि धेरै चुनौती छन्।
चुनौतीलाई कामले जितेर नगरवासीअघि आफूलाई योग्य देखाउनुपर्ने नयाँ बोर्डअघि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। मोर्चाको नयाँ बोर्डअघि आफू मात्र छैन। कार्य गर्दा यताउति भए अथवा कार्य गर्नमा सुस्तता देखाए घेराबन्दी गरिहाल्ने विपक्षीका तीन नगरपार्षद् पनि छन्, जसको कर्तव्यै बन्छ, बोर्डको अकर्मतामा ठोस घेराबन्दी र विकास कार्यमा रचनात्मक सुझाउ दिनु। गत सोमबार शपथ ग्रहण गरेको बोर्डले हिजोदेखि बिस्तारै कार्य थालेको छ।
आउँदो सोमबार बोर्डको स्ट्याण्डिङ कमिटी गठन हुनेछ। यो स्ट्याण्डिङ कमिटी गठन भएपछि कार्यमा तीव्रता ल्याउने नपा अध्यक्ष कृष्ण लिम्बूले बताएका छन्। नयाँ बोर्डअघि के कस्ता चुनौती छन् ?, यसलाई स्वीकार्ने कार्ययोजना बोर्डसँग के कस्तो छ ? बोर्डले चुनावी घोषणा-पत्रमाथि के कति काम गर्नेछ ? खरसाङ नपाका समस्याहरू के के हुन् ? यी यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरहरू खोज्न खबरम्याग्जिनले नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बूसँग गरेका कुराकानी हाम्रा पाठकहरूका लागि यहाँ राखिएको छ।
खरसाङ नगरपालिकाको मूल समस्या के हो ?
खरसाङ नगरपालिकाको मूल समस्या स्वच्छताको हो। स्वच्छ खरसाङ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। यहाँको बजार, बाटोघाटो, स्वरेज सिस्टम नालाझोड़ा सबै स्वच्छ बनाउन सके अन्य समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जानेछ। परिवेश स्वच्छ भए दुर्गन्ध हट्नेछ। हैंजा रोग घट्नेछ। म देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्पूर्ण देशलाई स्वच्छ बनाउन अहोरात्र लागिपरेझैं म पनि खरसाङलाई स्वच्छ बनाउन दैनिक खटिरहनेछु।
यहाँको ठूलो समस्या त पानी होइन र ?
खरसाङमा पानीको दुःखै छन् तर वितरण प्रणाली भने ठीक नभएकोले पानीको समस्या ठूलो देखिएको हो। हामीसित पानीका थुप्रै स्रोत छन्, यसलाई व्यवस्थित पार्न सके पानीको समस्या हटेर जानेछ। हामी पानीको समुचित वितरण प्रणाली, स्रोतको संरक्षण र यसलाई बढ़ाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौं।
घोषणा-पत्रमाथि के कति काम गर्नेछ नयाँ बोर्डले ?
हामीले चुनाउअघि नगरवासीलाई जे जे कुराको आश्वासन दिएका थियौं, चुनाउको मुद्दा बनाएका थियौं, ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं। आउँदो सोमवार स्ट्याण्डिङ कमिटी गठन गरिनेछ। बीसै वार्डका नगरपार्षद्हरूले आ-आफ्नो वार्डका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विपक्षीका तीन नगरपार्षद्हरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने मलाई आशा छ। बोर्डको प्रत्येक कार्य सञ्चालनमा उनीहरूलाई पनि हामी अँगाल्नेछौं। पहिला घर पूर्ण रूपले बनिन दिनुहोस्। आउँदो 15-20 दिनभित्रै बोर्डको कार्य नगरवासी देख्नेछन्।
राज्य सरकारले असहयोग गरे बोर्ड सञ्चालनमा प्रभाव पर्दैन ?
राज्य सरकारले डायरेक्ट यस्तो गर्न सक्दैन। राज्यका सबै नगरपालिकालाई कोष अनुमोदन गर्दा खरसाङ नगरपालिका पनि गर्नैपर्छ। यदि राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यले असहयोग गरे हामी सङ्ग्रहित कर र जीटीएबाट फण्ड मागेर पनि नगरपालिकाका कार्यहरू सञ्चालन गर्नेछौं। नभए यो कुरा लिएर केन्दसम्म पुग्नेछौं। फाइट गर्नेछौं।
खरसाङ नगरपालिकामा कर सङ्ग्रहमा वृद्धिको सम्भावना कति छ ?
धेरै छन्। खरसाङ नगरपालिका वार्षिक कर सङ्ग्रह प्रायः 1 करोड़ हुन्छ। यसलाई अझ बढ़ाएर डेड़ करोड़ बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यदि यसो गर्न सकिए यति राशिले प्रायः6महीना नगरपालिका चलाउनसकिन्छ।
बोर्डअघि चुनौतीहरू के कति छन् ?
धेरै र ठूला चुनौतीहरू छन्। पर्याप्त पैसा छैन। समस्याहरू धेरै छन्। यद्यपि यी चुनौतीहरूलाई जितेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नेछौं। हामी कामले जित्नेछौं। यी चुनौतीलाई जितेर कार्य गर्न मलाई सबै नगरपार्षद् र नगरवासीले सहयोग गर्नेछन् भन्ने आशा छ।